मानिसहरु कहिले देखि दुध सेवन गर्थे? भेटियो प्रमाण – Dcnepal
मानिसहरु कहिले देखि दुध सेवन गर्थे? भेटियो प्रमाण
प्रकाशित : २०७६ भदौ २५ गते १२:३६
बीबीसी । मानवजातिले दूध सेवन गर्ने गरेको सबैभन्दा पुरानो र स्पष्ट प्रमाण वैज्ञानिकहरूले फेला पारेका छन्। ब्रिटेनमा प्रागैतिहासिक कालमा बसेका किसानका दाँतमा भेटिएको टाटोमा दूधमा हुने प्रोटीन भएको प्रमाणित भएको छ। यसको अर्थ मानिसहरू छ हजार वर्षअघि देखि नै दुग्धपदार्थ सेवन गर्थे।
तर त्यति बेला उनीहरू दूधमा हुने ल्याक्टोज पचाउन सक्दैनथे। त्यसैले सोझै दूध सेवन नगरेर उनीहरूले दूधबाट दही, चीज वा अन्य फटाएर अरू केही परिकार बनाउने गरेको सम्भावना देखिन्छ। दूध फटाउँदा ल्याक्टोजको मात्रा घट्ने र स्वादिलो पनि भएको हुन सक्छ।
यो अनुसन्धान गर्ने समूहका सदस्यले दाँतको टाटा खुर्किएर त्यसमा भएका विभिन्न रासायनिक तत्त्व छुट्याए। पछि ती तत्त्वको म्यास स्पेक्ट्रमट्री विधि प्रयोग गरेर विश्लेषण गरियो। त्यसो गर्दा उनीहरूले नीअलिथिक काल अर्थात् नवपाषाणयुगका सात जनाको दाँतबाहिरको सतहमा बीटा(ल्याक्टोग्ल्योब्युलिन (बीएलजी) नामक दूधमा मात्र पाइने प्रोटीन फेला पारे।
तर आनुवंशिक संरचनामा भएको परिवर्तनले आधुनिक युरोपवासीहरू दूध पचाउन सक्छन्। डा। चार्ल्टनका अनुसार त्यो बेला मानिसहरूले सीमित मात्रामा मात्रै दुग्धपदार्थ सेवन गर्ने गरेको हुन सक्छ। ल्याक्टोज इन्टोलरन्स भए पनि थोरै मात्रामा दूध सेवन गर्दा त्यसले खासै अप्ठेरो नपार्ने उनको भनाइ छ।
यो अध्ययनका लागि भेटिएका मानव अवशेष डोर्सिटको ह्याम्बल्डन हिल, ग्लोकस्टरशीरको हेजल्टन नोर्थ र नोर्थएम्प्टनशीरको ब्यान्बरी लेनमा फेला परेका थिए। ह्याम्बल्डन हिलमा भेटिएका एकचौथाइ भाँडामा दूधको चिल्लो पाइएको छ।
यसबाट त्यहाँ बस्ने मानिसको आहारामा दूध महत्त्वपूर्ण भएको देखाउँछ।अरू स्थानमा पनि चौपायाको बथान भएको र तिनबाट दूध दुहिने गरिएको प्रमाण पाइएको छ। ब्रिटेनमा छ हजारदेखि चार हजार चार सय वर्षअघिसम्म नवपाषाणयुग थियो। त्यही अवधिमा मानिसहरूले गाई, भेडा, बाख्रा र सुँगर पाल्न थालेका हुन्।